Nhau - Ongororo paZvino Mamiriro uye Kubudirira Tarisiro yeMagetsi Turu Maindasitiri
Nekuvandudzwa kwehupfumi hwepasi rose uye nekukurumidza kukudziridzwa kwemagetsi maturusi musika, iyo Internet yakashandura bhizinesi modhi yemazhinji maindasitiri echinyakare mumakore apfuura. Seye indasitiri yechinyakare, zvishandiso zvemagetsi zvinofanirwa kubvuma chinetso cheInternet. Makambani mazhinji emagetsi emagetsi anogamuchira e-commerce musika mukuyedza kunzvenga kukanganisa kweanotengesa mamodheru. Parizvino, iyo hombe magetsi maturusi indasitiri haina rombo rakanaka kuve chikamu chakakora chee-commerce kukura.
Mazuva ano Magetsi maturusi shanduko e-commerce muChina inogona kuoneka kwese kwese, mumakore ekutanga kuburikidza nekugadzwa kwavo chaiko e-commerce chikuva, nekuti kudyiwa kwevashandi, capital kwakanyanya, uye haigone kusvika kune yaitarisirwa kuyerera, yakatanga kusiyiwa zvishoma nezvishoma, parizvino kunyanya mubato rechitatu B2C e-commerce chikuva, senge Tmall, JingDong, Su Ning, Amazon zvichingodaro. Bhenefiti yekupinda mumusika we e-commerce iri munzira yemagetsi maturusi kuburikidza neInternet kuti vashandure kugadzirwa kwavo, manejimendi, kutengesa uye zvimwe zvinongedzo, kuitira kuti madiki uye epakati-saizi yemagetsi emagetsi maturusi emabhizinesi awane mikana yakawanda, ramangwana maoko avo pachavo.
1. seimwe yeanowanzo shandiswa ekushandisa maturusi, emagetsi maturusi anogona kuwanikwa kwese kwese, senge yemagetsi chibooreso, chainsaw, yekucheka muchina, angle grinder uye zvichingodaro. anoshandiswa nevakawanda, kusanganisira zvemaziso indasitiri, mapurani kushongedzwa, kugadzira nzvimbo, kugadzira huni, kugadzirisa mari nezvimwewo, izvo zvinoita basa rinokosha mukusimudzira magariro nehupfumi. Senyika huru kwazvo dzichiri kusimukira muChina, maturusi emagetsi akaverengerwa seindasitiri yepamberi yekugadzira michina.
2. pfungwa yekutenga pamhepo yakadzika midzi mumoyo yevanhu, maturusi emagetsi ne e-commerce yekutengesa modhi, ichawedzera kugadzirwa kwechigadzirwa, kusingagumiri pakutengesa matunhu, panguva imwe chete, kuziva kwebhizinesi kuchaita. zvakare uvandudze, kuvhurwa kwechitatu-bato mapuratifomu.
3. kubatsirwa nekufambiswa kwetekinoroji tekinoroji, maturusi emagetsi anoshandurwa zvishoma nezvishoma kuchenesa magetsi emagetsi, kugona kwebhatiri uye kuchengetedzwa kwemidziyo yemagetsi zvinotarisirwa kuvandudzwa zvakanyanya, uye mitengo yebhatiri inogara ichideredzwa. Nekuwedzera kwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu mumhuri, maturusi emagetsi anofanirwa kuita zvakasiyana siyana zvekushandisa, budiriro yemagetsi kudzora tekinoroji, maturusi akangwara mumhuri, indasitiri yekuvandudza kugona ingangove hombe.